TRINITERA: CHAPITRE PROVINCIAL
"Fiombonana sy asam-panavotana"
"Communion et Rédemption"!
Ireo pretrantsika vaovao
Hiatrika ny Chapitre Provincial faha-5 isika ny 12-17 janoary ho avy izao. Fahasoavana izany nefa koa finiavana satria mampifamahofaho zavatra maro. Ny fitondrana am-bavaka izany Fihaonana farantampony ho an'ny Province-ntsika izany dia adidy masina ho antsika rehetra.
Ahoana tokoa moa no hanehoantsika ny Voninahitry ny Trinite Masina eto anivon'ny Nosintsika izay miandrandra koa ny tsirambin'ny tanantsika ho fanandratana azy?
Tsy mora ny miandry antsika. Na ny fiainana mba ho olombanona aza ahitantsika olana ny fanabeazana ho amin'izany, tsy hodian-tsy hita ny rivo-mahery sedrain'ny finoan'ny kristianina maro! Ary isika Relijiozy? Tsy irery anefa isika ary tsy herintsika velively no sanatria hireharehantsika fa ny Voninahitr'Izy Trinite Masina izay antoka ho antsika satria Izy no nifidy antsika hitondra ny Anarany.
Adidintsika tsirairay ary, na ny Rahalahy amin'ny Fikambanana na isika mpitsidika satria te hiombom-po amam-panahy aminay trinitera ny manohana am.bavaka izany fihaonana izany mba ho Voninahitry ny Trinite Masina irery ihany.